Lalao Olaimpikan’ny Andro Ririnina – Pyeongchang 2018: Fandraisana Anjara Betsaka Nataon’ireo Atleta Afrikanina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2018 12:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, 日本語, Français
Tamin'ny Lalao Olaimpika ny andro ririnina 2018 tany Pyeongchang, izay nanomboka ny 9 Febroary, ireto firenena Afrikanina valo ireto dia manana solotena iray farafahakeliny. Afrika Atsimo, Eritrea, Ghana, Kenya, Madagasikara, Maraoka, Nigeria sy Togo dia samy nandefa atleta iray any amin'ny Lalao Olaimpika ny andro ririnina 2018 (9 hatramin'ny 25 Febroary any Pyenongchang). Miisa 13 izany iireo atleta.
Mamerina mitety ireo olana izay manomboka any amin'ny famoronana federasiona ho an'ireo taranja ka hatrany amin'ny fitadiavana famatsiambola i Carole KOUASSI:
Na izany aza, araka ny fanamafisan‘ny qz.com azy, ho an'ireo atleta sasany ireo dia tsy izao no fandraisana anjara voalohany:
Kanefa misy medaly mbola tena manan-danja kokoa ao Pyeongchang ho an'ireo atleta Afrikanina 13 ireo, ao Korea Atsimo: ho lasa Afrikanina voalohany hahazo medaly Olaimpika amin'ny andro ririnina.
Atolotr’ i Vincent DEGUENON tsirairay avy ireo atleta Afrikanina, amin'ny fanazavàna ny fomba nahatonga azy ireo hisolo tena ireo firenena izay tsy dia misy mahafantatra ary marihany fa:
Hazavainy ny fomba nataony hahatonga azy ho Togolezy:
Ao anatin'ny hafatra navoakany, tamin'ny volana Janoary 2018, tao amin'ny blaoginy, alessiadipol.altervista.org, tsy afeniny ny hafanam-pony sy ny fifikirany amin'ny lokon'ny firenena izay soloiny tena amin'ny Lalao Olaimpika.